IPinterest izovumela ukuthenga izinto nge-Apple Pay | Ngivela kwa-mac
IPinterest izokuvumela ukuthi uthenge izinto nge-Apple Pay
UJesu Arjona Montalvo | | iPad, iPhone, Izaziso
Pinterest sekuyisikhathi eside ingumthombo wokhuthazo lokudala kubantu abaningi, lapho bekhombise khona ubuciko babo kuPinterest. Njengamanje, singazithola lezi zinto, kusuka ku- uhlelo lokusebenza olufanayo.
NgoLwesibili, ngoJuni 2, iPinterest imemezele kubhulogi yayo ukuthi maduze izokwenza kube lula kubasebenzisi ukuyihlanganisa ukwazi ukuthengisa imikhiqizo yakho. Ngalezi zikhonkwane, abasebenzisi bazokwazi thenga izinto ezithile. Lokhu kuthenga kungenziwa ngesikweletu noma ngedebithi ngokujwayelekile, njengokujwayelekile, futhi bamemezele nokuthi abasebenzisi bazokwazi ukusebenzisa I-Apple Pay.
Kungaba kuhle, uma uPinterest evumela ukuthenga zonke izingubo ezivela ku-Pinterest, ngifisa sengathi ngabe kukhona inkinobho yokuthenga ku-Pinterest. Kusho uRebecca Strebe.
Njengoba bememezele, ku amasonto ambalwa, bazokwethula izikhonkwane, ukuze ukwazi ukuthenga ngaphandle kokushiya izikhonkwane ezijwayelekile zaso sonke isikhathi, abakufunayo ukuxhumana okuningi nomsebenzisi, futhi bakwazi ukukwenza nikeza ukusebenza okulindelekile, okuyinto amaklayenti amaningi ayicela.
Okuluhlaza okwesibhakabhaka kusho ukuthi ungathenga
Lapho uthola ifayela le- Phina ngentengo eluhlaza okwesibhakabhaka, uzokwazi ukuthi ungathenga ngqo kusuka kuhlelo lokusebenza. Ufuna okuthile okucacile? Sebenzisa i- isihlungi sentengo, ukuze ucwenge ukusesha.
Kusuka ngaphakathi kohlelo lokusebenza lwePinterest, kuzoba nezinketho lokho kuzoba yizinto ezithile. Isibonelo, lapho uthenga izingubo, kuzoba ne- usayizi inkethokanye a ikhono lokukhetha imibala, uma zikhona.
UPinterest uthe le nketho izoba kufayela le- amaviki alandelayo, nokuthi ngaphezulu kwalokhu kusebenza, kuzophinda kusize abasebenzisi, indlela yokuthumela nendawo.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Imikhiqizo ye-Apple » iPad » IPinterest izokuvumela ukuthi uthenge izinto nge-Apple Pay
Indiza i-iPhone 6 Plus
I-Fantastical 2 ivuselelwa ngokusekelwa kwe-Apple Watch nezinye izindaba ku-Mac